Habka Sidus - Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Habka Sidus - Celceliska Dhaqdhaqaaqa ee ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Istaraatiijiyadda «Sidus Method» waa farsamo ganacsi oo faa'iido leh oo fudud oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah. Tani way ufiican tahay bilowga - astaamaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo lagu kalsoonaan karo waxay keenaan faa'iido joogto ah oo ku saabsan isbeddelada muddada gaaban.
Waqtiga Mid kasta oo ka mid ah M1-M5. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Hantida ganacsiga: Lammaane kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Waqtiga ganacsiga: Dhamaan kalfadhiyada ganacsiga Forex.
Ikhtiyaarka khidmadda boqolkiiba: Aan ka yarayn 70-75%.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba nooc oo celcelis ahaan celcelis ah:
celcelis ahaan laba jibbaar (EMA) oo leh xilliyo 18 iyo 28 ah . Go'aamiso jihada isbeddelka muddada-dhexe. On biibiilaha kacsan sare waxaa loo isticmaali karaa sida channel channel, gudaha aad ku ganacsan karto (ballac aan ka yarayn 10-15 dhibcood). Burburka ayaa noqon doona calaamadda binary ee isbeddel cusub. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
celcelis miisaan (WMA) leh mudo 5 iyo 8 ah . Qiimee xoogga, jihada isbeddellada "dhakhso leh" oo muuji barta furitaanka / xirmooyinka xulashooyinka. Celceliska Dhaqdhaqaaqa Miisaanka, sicirada ugu dambeeya waxay leeyihiin culeyska ugu weyn, sidaas darteedna falcelinta isbeddelladooda ayaa dhakhso badan!
Ikhtiyaar CALL. Laba celcelis ahaan celceliska dhaqaajinta WMA ayaa ka gudbaya EMA gaabiska ah xagga hoose ilaa kor.
Dooro door. Xaaladaha dib u dhaca: WMA waxay ka gudbeysaa EMA gaabiska ah kor ilaa hoos.
Haddii isku celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa uu isu dhow yahay midba midka kale, markaa tani waxay muujineysaa isbeddel isbeddel ah. Waxaan ku sii nagaaneynaa banaanka suuqa waxaanan sugeynaa calaamadda xigta. Fur ganacsi shumaca xiga ka dib calaamadaha binary . Waqtiga dhicitaanka ee xulashooyinku waa inaysan ka yarayn 5-7 daqiiqo xitaa haddii waqti cayiman la doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Waxaad ku hagaajin kartaa natiijooyinka adigoo falanqeynaya dhowr wakhti oo isku mar ah. Older M5-M15 wuxuu bixin karaa calaamadda isbeddelka isbeddelka qarsoon, kaas oo markaa lagu xaqiijinayo heshiiska M1.
Marka lagu daro jadwalka kale iyo aaladaha kale, waxaan la soconaa horumarka maalinta ganacsiga, gudaha taas oo ay jiraan dhowr xaaladood oo caadi ah oo soo noqnoqda oo celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa uu falcelinayo.
Faahfaahin dheeri ah oo laba-cirifood ah oo ka miira celceliska dhaqdhaqaaqa ayaa noqon kara RSI iyo Stochastic oscillators oo leh heerarkooda xad dhaafka ah (xaqiijinta xulashooyinka PUT) iyo xad-dhaaf (loogu talagalay xulashooyinka CALL);
Waxaan la soconaa barxadda ganacsiga laba-geesoodka ah ee sii-deynta wararka aasaasiga ah ee muhiimka ah iyo tirakoobka. Ma fureyno ikhtiyaarka isla marka daabacaadda kadib, oo, haddii ay suurtagal tahay, xirno macaamilkan hadda jira 15-20 daqiiqo kahor daabacaadda;
Waqtiga dhicitaanka waa la kordhin karaa ilaa 5-7 daqiiqo haddii isbeddelka joogtada ah la arko. Sidoo kale inta lagu jiro xilliyadaas oo kale, waxaa suurtagal ah in la furo dhowr ikhtiyaar oo leh waqti shaqeynaya oo kala duwan si looga qaado ugu badnaan dhaqdhaqaaqa halista ugu yar. Haddii dallaalku fursad u siiyo inuu xiro ikhtiyaarka illaa uu ka dhacayo, markaa hubaal waxaan hagaajineynaa macaamilka (xitaa haddii faa'iido tahay!) Soo bixitaanka calaamadda ka soo horjeedda!
Istaraatiijiyadda intraday «Habka Sidus» wuxuu u taagan yahay nidaam lagu kalsoonaan karo oo ah muxaafid xagjir ah oo loogu talagalay ganacsiga suuqa xasilloon. Muddada celceliska dhaqdhaqaaqa waa la beddeli karaa iyadoo loo eegayo isbeddelka hadda jira. Gaar ahaan sida calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay suurtogal u tahay oo keliya goobaha isbeddelka, muddada dabaqyada ma adeegsanno istiraatiijiyad! Habka "Puria Method" ee Forex waa si otomaatig ah: waxaad ka heli kartaa noocyo kala duwan oo ah aalado ganacsi oo shabakadda ka shaqeeya, laakiin waxaa fiican inaad ka ganacsato gacanta adigoo isticmaalaya calaamado dheeri ah vfxAlert.